संक्रमितको आँखामा ‘कालो ढुसी’ उच्च मात्रामा देखिदै, यो कुन रोग लागेका मानिसमा सबै भन्दा धेरै देखिन्छ ? — Imandarmedia.com
संक्रमितको आँखामा ‘कालो ढुसी’ उच्च मात्रामा देखिदै, यो कुन रोग लागेका मानिसमा सबै भन्दा धेरै देखिन्छ ?
काठमाडौँ । नयाँ दिल्ली (एएनआई)- कोभिड उपचारको छ हप्ता भित्र बिरामीहरूलाई ‘ब्ल्याक फङ्गस’ (आँखामा कालो ढुसी)को उच्च जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । अल इन्डिया मेडिकल इन्टिच्युट (एम्स) का वरिष्ठ नशारोग विशेषज्ञले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
एम्समा न्यूरोसर्जरीका प्राध्यापक डाक्टर पी शरत्चन्द्रले भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईसँगको कुराकानीमा भने, ‘फङ्गल’ संक्रमण कुनै नयाँ समस्या होइन । सङ्क्रमणका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् ।’
सबभन्दा महत्वपूर्ण कारणमध्ये एक मधुमेहको नियन्त्रण हुन नसक्नु, रोगीलाई भेन्टिलेसनमा राखी पूरक अक्सिजन दिँदा यो सङ्क्रमण हुनसक्छ ।
कोभिड उपचार को छ हप्ता भित्रमा यदि मानिसहरूलाई यी कुनै पनि कारण कालो फङ्गसको उच्च जोखिम रहने गर्छ, डाक्टर शरत्चन्द्रले बताए ।
उनले सचेतनाका लागि भने, “सिलिण्डरबाट चिसो चिसो अक्सिजन दिँदा यसले बिरामीहरूमा चिसोका कारण पैदा हुने ब्ल्याक फङ्गसजस्ता समस्या निम्त्याउने खतरा हुन सक्छ ।” भारतका विभिन्न भागहरूमा ‘कालो ढुसी’ संक्रमणका घटनाहरू जानकारीमा आइरहेका छन् ।
राजस्थान, गुजरात, पञ्जाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिसा, तेलङ्गना र तमिलनाडुजस्ता राज्यहरूले महामारी रोग ऐनअन्तर्गत यसलाई ‘अधिसूचित’ रोग घोषणा गरिसकेका छन् ।
कोभिड महामारीको अतिरिक्त कालो ढुसीको सङ्क्रमण समस्या बढ्दो चिन्ताको बीचमा, दिल्लीको सर गंगाराम अस्पतालमा सानो नशाको म्युकोर्मिकोसिसको दुर्लभ घटनाहरू देखिएका छन् ।
भारतमा घट्दैछ संक्रमण, थपिए २ लाख ४३ हजार संक्रमित
दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा दुई साता यता कमी आएको छ । लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ लाख ४३ हजार ७७७ जनामा संक्रमण भएको छ । यो संख्या शनिबारको तुलनामा झण्डै ११ हजारले कम हो ।
पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या २ करोड ६५ लाख २८ हजार ८४६ पुगेको छ । यसअघि भारतमा पहिलो पटक १८ वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि ४ लाख नाघेको थियो ।
संक्रमितको संख्या २४ वैशाखमा भारतमा सबैभन्दा उच्च विन्दुमा ४ लाख १४ हजार ४३३ पुगेको थियो । भारतमा दैनिक संक्रमितसँगै परीक्षण गरिएकामा कोरोना पोजेटिभ देखिने दर पनि घटेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३ हजार ७८८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार भारतमा कोरोना संक्रमितको मृतक संख्या २ लाख ९९ हजार २९६ पुगेको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा ३१ मेसम्म कर्फ्यू
भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि जारी गरेको कर्फ्यू लम्ब्याएको छ । कोरोना संक्रमण दर नघटेको भन्दै ३१ मे बिहान ७ बजेसम्म राज्यमा जारी गरिएको आंशिक कर्फ्यू लम्ब्याइएको हो ।
उत्तर प्रदेशमा ३० अप्रिलदेखि कर्फ्यू जारी छ । कर्फ्यूको अवधि बढाइए पनि यसपटक कुनै नयाँ प्रतिबन्धहरू थपिएको छैन । यस समयमा चिकित्सा, आवश्यक चिजहरू, ई-बैंङ्किङ र आपतकालीन सेवाहरू सञ्चालन गर्न दिइने छ ।